Vallọ ọrụ na-ahụ maka njikwa valvụ, ndị na - eweta ya - Ndị na-emepụta ihe eji emepụta ihe na China
Usoro ZHD (Eletriki ma ọ bụ Pneumatic) Opekempe Flow Control Valve
Profaịlụ ZHD multistage onu akara valvụ eji multilevel onu symmetric uwe aka valvụ. Ọ na-ejikwa ọsọ ọsọ na-achịkwa ọsọ ọsọ, wee belata mkpọtụ nke gas dị elu ma ọ bụ uzuoku n'ime valvụ, nrụgide multistage na-ebelata mbenata irè gbochie cavitation mmiri, yabụ ọ bụ valvụ na-achịkwa anụ eji arụ ọrụ arụmọrụ dị elu, ndị ahịa nwekwara ike ịhọrọ multi usoro nkpuru nke disphragm ma obu ihe ndi ozo, wdg. T ...
ZDM Series Akpaaka recirculation control valve
Profaịlụ ZDM usoro Akpaghị aka recirculation valvụ bụ ụdị nke mgbapụta nchebe ngwaọrụ. Ọ na-akpaghị aka na-echebe mgbapụta nke centrifugal mgbe mgbapụta ahụ na-eme ka mmebi ihe na-adịghị ike (karịsịa na-ebute mmiri ọkụ na obere ọrụ ọrụ). Ozugbo mgbapụta mgbapụta dị ala karịa usoro etinyere, ịgafe nwere ike mepee kpamkpam iji hụ na mgbapụta kachasị mkpa achọrọ. Ọbụna na-agba ọsọ kpamkpam emechi, ya bụ na-agba ọsọ eruba bụ efu, kacha nta eruba nwekwara ike ịgafe uzo maka Automatic recirculation. Nrụgide r ...
ZDL Series Akpaaka recirculation control valve
Profaịlụ ZDL usoro Auromatic recirculation valvụ bụ ụdị nke mgbapụta prtectiong ngwaọrụ. Ọ na-akpaghị aka na-echebe mgbapụta nke centrifugal mgbe mgbapụta ahụ na-eme mmebi cavitation ma ọ bụ ejighị n'aka (karịsịa na-ebute mmiri ọkụ na obere ọrụ ọrụ). Ozugbo mgbapụta mgbapụta dị ala karịa usoro etinyere, ịgafe nwere ike mepee kpamkpam iji hụ na mgbapụta kachasị mkpa achọrọ. Ọbụna na-agba ọsọ kpamkpam emechi, ya bụ na-agba ọsọ eruba bụ efu, kacha nta eruba nwekwara ike ịgafe uzo maka Automatic recirculation. Nrụgide ...
ZDT Model Automatic recirculation na-achịkwa valvụ
Profaịlụ ZDT usoro akpaghị aka recirculation valvụ bụ ụdị nke mgbapụta nchebe ngwaọrụ. Ọ na-akpaghị aka na-echebe mgbapụta nke centrifugal mgbe mgbapụta ahụ na-eme mmebi cavitation ma ọ bụ ejighị n'aka (karịsịa na-ebute mmiri ọkụ na obere ọrụ ọrụ). Ozugbo mgbapụta mgbapụta dị ala karịa usoro etinyere, ịgafe nwere ike mepee kpamkpam iji hụ na mgbapụta kachasị mkpa achọrọ. Ọbụna na-agba ọsọ na-emechi kpamkpam, ya bụ isi na-erugharị bụ efu, nke kachasị dị ala nwekwara ike ịpụpụ site na uzo. Usoro ZDT nwere nnukwu uzo, ...
Nka na ụzụ teknụzụ ọnụ ọnụ dayameta ： 3/4 “~ 6” nsogbu ọnụ B16. 104 V leakage (akara ọkwa VI dị) Njirimara Ngosipụta 1) Nkọwapụta ntụgharị ọbara mgbatị, ọtụtụ nrụgide na-ebelata usoro. 2) Energy arụmọrụ, ens ...
Njirimara Circulatory convection, usoro nrụpụta ọtụtụ nrụgide, zere cavitation rụọ ọrụ nke ọma, gbatịkwuo ndụ ọrụ. Enwere ike iwepụ ihe niile trim ngwa ngwa ma dochie ya, dị mfe iji jikwa ọnụ ala. Mbubata elu-edu azuokokoosisi mbukota ana achi achi-free enweghị Ugboro nnọchi. Scientific ewu, elu-arụmọrụ ihe na-atọkwa rụọ nwee ma plọg na onu nwere magburu onwe mgbochi igbochi na mgbochi ọdịdọ arụmọrụ nke mere na a obere amo ...
Performance oke ọnụ ọnụ N'obosara 3/4 "~ 4" ọnụ ọnụ mgbali ANSI 150LB-4500LB Isi ụdị Y ụkpụrụ nke 45-ogo n'akuku Isi ihe A105, F22, F91, F92, F316H Bonnet ọkọlọtọ, jụrụ Ọdịdị Kpaa integral stellate oche mbukota Mgbanwe graphite na igwe anaghị agba nchara waya Flow njirimara ngwa ngwa oghere Twodị abụọ nke ihe omume bụ nhọrọ pneumatic diaphragm actuator (pneumatic multi-spring na single-spring diaphragm actuator are optiona ...
Nkọwa ọnụ ọnụ dayameta 3/4 “~ 4” ọnụ ọnụ Nsogbu ANSI 150LB-4500LB Isi ihe A105, F22, F316H, F91, F92 Flow àgwà ngwa ngwa oghere Uru 1) Magburu onwe mbukota usoro The ojiji nke Garlock elu okpomọkụ mbukota ana achi achi kasị mma akara na mmanu. ịrụ ọrụ yana ịrụ ọrụ dị mfe n'ọnọdụ dị mma. 2) Stellate cobalt based hard alloy disc Ihe akara nke diski na-ese carbide ma ọ bụ alloy carbide siri ike, nke nwere ...
Ihe Nha ụdị DN25 ~ DN400 Nrụgide nrụgide 150Ib, 300Ib, 600Ib Isi ihe dị iche iche dị, dị ka WCB, WC6, WC9, CF8M, CF8, CF3M, CF3, wdg. Igba Omume Omume ngwa ngwa, linear ma ọ bụ pasent nha uru 1) Valve nkwụnye kwụsie ike jupụtara na ntuziaka cylinder na-enye ezigbo nkwụnye nkwụnye, nke na-ebelata mkpọtụ na mkpọtụ igwe; 2) Ike ịgbanye ikike iyi mmiri na-asọpụta na-eme ka nguzogide na njedebe dị ala ...